Madaxweyne Maamul Goboleed ka tirsan Soomaaliya oo soo dhoweeyey iscasilaada Guddoomiye Jawaari – Madal Furan
Hoy > Warka > Madaxweyne Maamul Goboleed ka tirsan Soomaaliya oo soo dhoweeyey iscasilaada Guddoomiye Jawaari
Madaxweyne Maamul Goboleed ka tirsan Soomaaliya oo soo dhoweeyey iscasilaada Guddoomiye Jawaari
Editor April 10, 2018 Warka 0
Dhuusa-mareeb (Madal Furan) – Madaxweynaha Maamul Goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa noqonaya midkii ugu horeeyey ee soo dhoweeya iscasilaada Guddoomiyihii Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari.
Mudane Xaaf ayaa Guddoomiye Jawaari ku tilmaamay inuu yahay nin oday ah oo Nabadoon ah isla markaasna dalka ka badbaadiyey inuu burburo iyo weliba dibu dhac mar kale soo wajihi lahaa, wuxuuna Madaxweynaha Dowladda Soomaaliya u diray baaq uu ku sheegayo inuu iska ilaaliyo khilaafyada noocaan oo kale ah oo soo noqnoqda.
Wuxuu sidoo kale codsaday Golaha Baarlamaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya inay wixii hadda ka danbeeyea ay ka taxadaraan khilaafyada soo laablaabtay ee Baarlamaanka dhexdiisa ah
Madaxweyne Xaaf ayaa hadalkan ka jeediyey garoonka diyaaradaha ee magaaladda Dhuusa Mareeb xili uu ka soo laabtay dalka Jabuuti oo uu sheegay inuu kaga soo qayb galay shir ay isugu tageen Madaxda dalka Jabuuti iyo shirkaddo caalami ah.
Mudane Xaaf wuxuu kaloo carabka ku dhiftay inuu kala hadlay ka soo qaybgalayaashii kulanka Jabuuti dhismaha dekedda magaaladda Hobyo ee maamulkiisu hoos yimaado.
Maamulada kale ee dalka Soomaaliya ka jira ayaan ilaa iminka ka hadal sida ay ula muuqato iscasilaada Guddoomiye Jawaari.
Madaxweyne Farmaajo oo ka tacsiyeeyey geerida ku timid marxuum Maxamuud Qanyare Afrax.
Bubaa oo Fayl Madow oo looga shakiyey inay ku jirto Natiijadii shirweynaha beelaha Garxejis u gudbiyey Muuse Biixi
Iiraan oo markeeda hajabaad adag u dirtay Mareykanka